Gudida caddaalada oo isku-shaandhayn iyo eryid ku samaysay garsoorayaasha dalka - Wargane News
Home Somali News Gudida caddaalada oo isku-shaandhayn iyo eryid ku samaysay garsoorayaasha dalka
Gudida caddaalada oo isku-shaandhayn iyo eryid ku samaysay garsoorayaasha dalka
Hargaysa(Wargane News)- Guddiga Caddaaladda Somaliland, ayaa shaqo ka eryid iyo isku-shaandhayn ballaadhan ku samaysay garsoorayaal fara badan oo ka kala hawlgeli jiray maxkamadaha gobollada iyo degmooyinka dalka.
Fadhi xubnaha Guddiga Caddaaladdu ku yeesheen xaruntooda Salaasaddii toddobaadkan, ayaa la sheegay inuu ka soo baxay go’aan shaqada lagaga eryey ilaa 23 garsoore oo ka shaqayn jiray maxkamadaha gobollada iyo degmooyinka waddanka. Go’aankan oo aan weli rasmi ah loo shaacin ayaa sidoo kale waxa wehelinaya isku shaandhayn lagu sameeyey garsoorayaasha iyo guddoomiyayaasha maxkamadaha gobollada iyo degmooyinka. Ma jiro war rasmi ah oo ilaa hadda laga soo saaray tallaabadan, go’aan oo ka dhashay qiimayn la sheegay in Guddiga Caddaaladdu ku samaysay habka garsoorka oo dhaliilo fara badani ka soo baxeen uu iminka horyaal Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo isagu ah guddoomiyaha Guddiga Caddaaladda oo marka uu saxeexo uu meel mar noqonayo. Guud ahaan Shaqada iyo caddaaladda garsoorka ayaa si wayn loo dhaliilaa, iyadoo dadweynuhu sheegta dhibaatooyin kala duwan, waxaanna hore dhawr jeer Madaxweyne Siilaanyo u ballanqaaday in wax laga qabanayo shaqada, tayada iyo hufnaanta garsoorka dalka. Haseyeeshee, garsoorayaal ka kala tirsan maxkamadaha hoose ee Gobolka Maroodi-jeex ayaa si cad warbaahinta uga sheegay dhawr bilood ka hor in aannu garsoorka Somaliland madaxbannaanayn oo farogelin ku hayso xukuumaddu.
Dawlada Itoobiya Oo Hawda Ka Saartey Guud Ahaan Khadkii Internet-ka Ee Dalkaas
Somaliland: Seylici Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay Kadib Safar Oo Uu Ugu Maqnaa Dalalka Ingiriiska Iyo Belgium
Somaliland: Adeega Zaadka Oo Ay Dhibaato Badan Yeeshay Iyada Oo Ay Bilaabmaan In La Isku Diro lacag Messeg
Somaliland: “Madaxweyne Muuse Waxaad Mooda Inuu Taliskii Ciidanka Afraad Weli Xukumayo” Suldaanka Guud Ee Somaliland